Vakadzi vaMosesi vaviri vane chirevo kana dudziro yakadzama
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Vakadzi vaMosesi vaviri vane chirevo kana dudziro yakadzama
Vakadzi vaMosesi vaviri vane chirevo kana dudziro yakadzama
Nyaya isingaonekwi zvakanyanya yakatsvedza ichidarika nhengo dzekereke dzakawanda. Kuroorana kwaMosesi naZipora nemukadzi wekuEthiopia muKushi kunowanzofuratirwa kuchinzi chinhu chimwechete chakafanana. Asi tsvagiridzo yakadzama yakazivisa vakadzi vaviri vakasiyana chiprofita chine chirevo chakadzama kwazvo.
Ngatitangei kubuda pachena kuti vakadzi ava vanhu vaviri vakasiyana. Vadzidzi vemakereke “vanotsanangura” kuti Zipora nemukadzi mukushi munhu mumwechete akafanana. Tsananguro iyi haina nheyo dzeBhaibheri. Zvinongofungidzirwa kuti nekuda kwehukama hwepedyo hwaive nemaArabu nevanhu vekuEthiopia, Zipora nemhuri yake vaive vatengesi vaibva kuEthiopia vaitengesera muMediani.
Ethiopia yakataurwa nezvayo kanokwana kamakumi maviri muBhaibheri munhu kana vanhu vekuEthiopia vakataurwa kanokwana kamakumi maviri nekamwechete. Tisingatarisi Egipita (mucherechedzo wezvenyika), ndiyo nyika yemuAfirica yakanyanya kutaurwa nezvayo. Mwari ari kuedza kutidzidzisa chimwe chinhu pamusoro peEthiopia. Mediani yakataurwa kamakumi matatu nekapfumbamwe muBhaibheri muMediani kana kuti vaMediani vakataura nezvavo kanokwana kamakumi maviri nekashanu. Hazvina kubvira zvashandiswa pachinzvimbo pechimwe. Saka Mwari anotaura zviri pachena zvine musiyano pakati penyika mbiri idzi. Ichokwadi kuti nyika dzemaArabu nevanhu vekuEthiopia vaive nehukama hwepedyo hwekutengeserana saka zvaisashamisa kuti munhu asangane nemunhu wekuEthiopia munzvimbo dzeMediani. Saka ndicho chikonzero nei Mosesi akakwanisa kusangana nemukadzi wekuEthiopia paaifamba murenje.
2 MAKORONIKE 21:16 Zvino JEHOVA akakurudzira mweya yavaFirisitia neyavaArabhia, vakanga vari kurutivi rwavaltiopia, kuzorwa naJehoramu;
Izwi rechiHeberu rinoreva Ethiopia zvichibva muduramazwi raStrong nderekuti -- כּוּ שִׁית Kûwshîyth koo-sheeth'; feminine of H3569; a Cushite woman:—Ethiopian. Mukushi mukadzi wekuEthiopia.
Saka vanhu vekuEthiopia vakabva kuvakushi vana verudzi rwaHamu, mumwechete wevanakomana vaNoa.
Genesisi 10:6 Vanakomana vaHamu ndivo: Kushi, naMiziraimu, naPuti, naKenani.
Genesisi 10:7 Vana­komana vaKushi ndivo: Sebha, naHa­vhira, naSabhata, naRama, naSabhuteka; navanakomana vaRama ndivo: Shebha naDhedhani.
Mambokadzi weSheba, akashanyira Soromoni, akataurwa saMambokadzi weZasi (Mateo 12:42 naRuka 11:31) aivewo werudzi rwevakushi saka aive nehukama hwepedyo nevanhu vekuEthiopia.
VaMediani, nerumwe rutivi. Vakatanga senyika kubva kuvanakomana vaAbrahama vaakaita naKetura mumashure mekufa kwaSara.
Genesisi 25:1 Zvino Abrahama akawana­zve mumwe mukadzi, wainzi Ke­tura.
Genesisi 25:2 Iye akamuberekera Zimurami, naJokishani, naMedhani, naMidhiani, naIshibhaki, naShua.
Abrahama aive ari werudzi rwaShemu mwanakomana waNoa.
RUKA 3:34 Mwanakomana waJakobo, mwanakomana waIsaka, mwanakomana waAbrahama mwanakomana waTara, mwanakomana waNahori,
RUKA 3:35 Mwanakomana waSeruki, mwanakomana waRagau, mwanakomana waFareki, mwanakomana waEberi, mwanakomana waSarah,
RUKA 3:36 Mwanakomana waKainami, mwamakomana waArfakasadi, mwanakomana waSemu, mwanakomana waNoa, mwanakomana waRameki,
Saka vanhu vekuEthiopia nevekuMediani marudzi maviri akasiyana zvakanyanya, zvinotsanangurwa zviri pachena muMagwaro.
Bhaibheri rinoshandisa wanano pakati pemukadzi nemurume semucherechedzo wekutsanangura nawo hukama hwaKristu nekereke.
VAEFESO 5:32 Chakavanzika ichi, chikuru, asi ndinotaura zvaKristu nezvekereke.
2 VAKORINTE 11:2 Nokuti ndinegodo pamusoro penyu negodo raMwari; nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe, kuti ndikuisei kunaKristu semhandara yakachena.
Kana tikaverenga pamusoro pewanano muBhaibheri tinokwanisa kuiyananisa zvakare maKristu nekereke yake.
Zvino regai tienzanise wanano yaMosesi naZipora muMediani uye nemukadzi mukushi.
Mosesi semurume aimiririra Kristu. Mosesi rudzi rwaKristu uye akatoprofita pamusoro paKristu ari muprofita.
Deutronomio 18:15 JEHOVA Mwari wako uchakumutsira muporofita, unobva pakati pako, pahama dzako, wakafanana neni; unofanira kumuteerera iye;
Johane Mubapatidzi paaive panyika vaimubvunza kuti aive here muprofita akataurwa naMosesi.
“Uya muprofita” ndiJesu.
EKSODO 2:16 Zvino muprista weMidiani akanga ana vakunda vanomwe, ivo vakauya kuzochera mvura, vakazadza zvinwiro, kuti vanwise makwai ababa vavo.
Vakunda vanomwe vaifanira kuzoroorwa. Izvi zvinotaura pamusoro penguva nomwe dzemakereke umo Kristu aizoshanda nevaHedeni mukati menguva yese yenhorondo yekereke.
ZVAKAZARURWA 1:11 Richiti: Ndini Alpha na Omega wokutanga nowokupedzisira izvo Zvaunovona, zvinyore mubhuku, uzvitumire kereke nomwe, dziri muAsia, paEfeso, napaSmirna, napaPergamo, napaTiatira, napaSardisi, napaFiraderfia, napaRaodikia.
EKSODO 2:17 Vafudzi vakauya, vakavadzingapo, asi Mosesi akasimuka, akavabatsira, akanwisa makwai avo.
Vafudzi mucherechedzo wevatungamiri vemakereke vanhasi nezvimisikodzo zvemakereke avo zvine huwori. Vakaita chiprista chakasimba chinomira pakati paJesu neungano, kana vanhu, saka nekudaro vanodzivirira vanhu kuti vave neruwadzano naJesu Kristu pachake. Vanoita izvi nekurega kushandisa Bhaibheri setsime guru rechokwadi, asi vanobva vabatanidza nekusanganisa tumwe tumatsime twerwavanoti “ruzivo”. Ndivo vavambi verumwe “ruzivo” urwu.
Ezekieri 34:2 "Mwanakomana womunhu, profita pamusoro pavafudzi vaIsiraeri, profita, uti kwavari, kuna ivo vafudzi, zvanzi nalshe JEHOVA, `Vane nhamo ivo vafudzi vaIsiraeri vanozvifudza! Ko vafudzi havafaniri kufudza makwai here?'
Jeremia 5:31 Vaprofita vanoprofita nhema, navaprista vanobata ushe vachirairwa navo; asi vanhu vangu vanofarira izvozvo; zvino pakupedzisira kwazvo muchaiteiko?
Mosesi, mucherechedzo waKristu, anopikisa vafudzi nekuparidza chokwadi achichiwana muBhaibheri. Iyi ndiyo mvura yavaitora vachimwa.
EKSODO 2:18 Zvino vakati vachisvika kuna Rueri, baba vavo, ivo vakati, "Makurumidza kudzoka seiko nhasi?"
EKSODO 2:19 Vakati, "MuEgipiti akatirwira pamaoko avafudzi, akaticherera mvura, akanwisa makwai."
Zvakare Bhaibheri Mvura rine chokwadi chakakwana mariri kuti ritirwire. Hatifaniri kubvisa chero chinhu kubva kwariri, kana kuwedzera chero chinhu kwariri. Izvi zvakakosha kwazvo kuna Mwari.
ZVAKAZARURWA 22:19 Kana munhu akabvisa mashoko ebhuku yokuporofita uku, Mwari uchabvisa mugove wake pabhuku yovupenyu, nomuguta dzvene, napazvinhu zvakanyorwa mubhuku iyi.
Asi vakunda vakataura pamusoro paMosesi semuEgipita, zvichiratidza rudo rwavo nezvenyika. Vanoda kusunungurwa naKristu, asi havadi kumubatira saShe wavo. Kukohwa pasina kushanda. “Kubudirira uye Mwari anotikomborera nezvinhu”. Ndicho chinangwa chikuru here ichi.
EKSODO 2:20 Akati kuvakunda vake, "Zvino aripiko? Munhu uyu mamusiyirei? Mudanei, adye zvokudya."
Vakunda, vanasikana, mucherechedzo wekereke, havafaniri kusiya tsime ravanowana rusununguro rwavo, sezvakaitwa nekereke munguva yekereke yeEfeso.
ZVAKAZARURWA 2:4 Asi handifari nechinhu icho kwauri, kuti wakasiya rudo rwako rwokutanga.
EKSODO 2:21 Mosesi akatenda kugara nomunhu uyo; akapa Mosesi mukunda wake Zipora.
Pava pamberi, Mosesi akatora mhuri yake kuenda nayo Egipita kunotevera zvaaive achirairwa naMwari uye kunosunungura vana veIsraeri kubva kuEgipita muhuranda.
EKSODO 4:19 Zvino JEHOVA akati kuna Mosesi paMidhiani, "Enda, udzokere Egipiti, nokuti vanhu vose vaitsvaka kukuuraya vakafa."
EKSODO 4:20 Ipapo Mosesi akatora mukadzi wake navana vake vavakomana, akavatasvisa pambongoro, akadzokera kunyika yeEgipiti; Mosesi akatora tsvimbo yaMwari muruoko rwake.
EKSODO 4:21 JEHOVA akati kuna Mosesi, "Kana wodzokera Egipiti, chenjera kuti uite pamberi paFarao zvishamiso zvose zvandaisa muruoko rwako; asi ndichaomesa moyo wake, kuti arege kutendera vanhu kuenda.
EKSODO 4:22 Zvino undoti kuna Farao, `Zvanzi naJEHOVA, Isiraeri, mwanakomana wangu, idangwe rangu';
EKSODO 4:23 Ndakati kwauri, `Tendera mwanakomana wangu kuenda andinamate'; iwe ukaramba kumutendera; zvino tarira ndichauraya mwanakomana wako wedangwe."
EKSODO 4:24 Zvino vachiri panzira, pavakanga vavata, JEHOVA akasangana naye, akatsvaka kumuuraya.
“Pavakanga vavata” zvimbo yakaipa kuti Zipora awanikwe ari ane mwana. Kristu haagamuchirwi munzvimbo dzekuvata kana kuti dzimba dzakaitirwa vaeni.
RUKA 2:7 Akazvara dangwe rake mwanakomana, akamuputira nemicheka, akamuvanzarika muchidyiro chezvipfuwo, nokuti vakashaiwa nzvimbo muimba yavaeni.
Imba yavaeni inomiririra mapato emakereke akarongwa nehutungamiri hwevanhu vakatsiva hutungamiri hweMweya Mutsvene. Zipora aimiririra kereke.
Kristu anoonekwa amire kunze kwemukova weKereke kana “imba yevaeni” achigogodza.
EKSODO 4:25 Ipapo Zipora akatora ibwe rinopinza, akacheka rukanda rwapamberi rwomwanakomana wake, akarukanda patsoka dzake akati, "Zvirokwazvo, uri chikomba cheropa kwandiri."
Mwari akaita sungano naAbrahama nembeu yake akashandisa kudzingisa sechiratidzo chekusimbisa sungano iyi.
Genesisi 17:10 Ndiyo sungano yangu, yamunofanira kuchengeta pakati pangu nemi navana vako vanokutevera, vanako­mana vose pakati penyu ngavadzingiswe.
Saka, Abrahama nemaJuda ese vanozvidzingisa vanogamuchira sungano yakaitwa naMwari kwavari. Mwari anogamuchira kutenda kwavo nechiratidzo ichi.
VAROMA 4:11 Wakapiwa chiratidzo chokudzingiswa, kuti chive chisimbiso chokururama kwokutenda, kwaakanga ana’ko asati adzingiswa; kuti ave baba vavose vanotenda, kunyange vasina kudzingiswa, kuti vagonzi vakarurama;
MuTestamente Itsva Mwari anoita sungano iri nani nevatendi muna Jesu Kristu.
VAHEBERU 8:6 Asi zvino wakapiwa basa rakanyanya kunaka, sezvaari Murevereri wesungano inopfuvura nokunaka, yakasimbiswa nezvipikirwa zvinopfuvura nokunaka.
Chisimbiso chesungano iyi hachisi kudzingiswa asi Mweya Mutsvene.
VAKOROSE 2:11 Iye wamakadzingiswa vo maari nokudzingiswa kusingaitwi namavoko, muviri wenyama uchibviswa, nokudzingiswa kuri kwaKristu;
VAEFESO 4:30 Regai kuchemedza Mweya Mutsvene waMwari, wamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rokudzikinurwa.
Apa Zipora mucherechedzo wekereke isingagamuchiri hutungamiri hweMweya Mutsvene. Akadzingisa mwanakomana wake wedangwe akagamuchira sungano yaMwari. Iye nemwanakomana wake havaizogona kutarisana naFarao, aimiririra Satani, nechiratidzo chekuti vakanga vapinda musungano naMwari uye Mwari aive atambira kutenda kwavo. Mwari aizouraya mwanakomana waFarao aive asina kudzingiswa odzikinura mwanakomana wake akadzingiswa (Israeri).
Hutungamiri hweMweya Mutsvene ndipo panopatsanurwa Mwenga waKristu kubva kukereke yakaponeswa yevasikana mapenzi vanopinda munguva yekutambudzika kukuru. Pane kereke yakaponeswa inofanira kupinda munguva yeKutambudzika uye kune Mwenga waKristu achakwira kudenga nguva yeKutambudzika isati yatanga. Tinodzidza izvi panyaya yevasikana vashanu vakachenjera nevasikana vashanu mapenzi.
Mateo 25:2 Vashanu vavo akanga ari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera.
Mateo25:4 Asi vakanga vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo nemwenje yavo.
Mateo 25:6 Pakati povusiku vakanzwa mhere-mhere, tarirai chikomba chovuya! Budai mumuchingamidzei!
Mateo 25:9 Asi vakachenjera vakapindura vakati, kwete; zvimwe haangakwaniri isu nemi tose: endai henyu kunavanotengesa muzvitengere.
Mafuta mucherechedzo weMweya Mutsvene. Vasikana mapenzi vaive vanhu vairarama hupenyu husina zvipomerwa vaive “Mhandara”. Asi vaingoda chete kuwana ruponeso vasingagamuchiri kutongwa naJesu seMusoro wavo. Vaitosarudza vanhu kuti vavatungamirire vave misoro yavo vachipesana nemuchato kana wanano naJesu. Vachapinda munguva yeKutambudzika yakaoma vofira kutenda kwavo kuti vawane ruponeso uye havazowonekwe semukadzi waJesu Kristu.
Zipora akaita chikamu ichi. Akatambira chiratidzo chesungano paakaona rufu ruchiuya, asi aive atononoka kare. Akadaidza Mosesi, mucherechedzo waKristu, kuti “chikomba cheropa” izvi zvinomiririra nguva yeKutambudzika.
Mateo 24:21 Nokuti nenguva iyo kuchavapo kutambudzika kukuru, kusati kwakambovapo kwakadaro kubva pakutanga kwenyika kusvikira zvino vuye hakuchazovipo.
ZVAKAZARURWA 14:20 Chisviniro chakatsikwa kunze kweguta, ropa rikabuda muchisviniro rikasvika pamatomu amabhiza, rikaenda mastadia anechuru chinamazana matanhatu.
Nguva yeKutambudzika ichava nguva yakaipa kwazvo.
Mosesi akabva amutumira kuti adzokere kuna baba vaZipora vakazosangana pakanga pabuda rwendo rweEksodo muEgipita.
Eksodo 18:2 Jeturo, mukarahwa waMosesi, akatora Zipora, mukadzi waMosesi, nokuti akanga amudzosera kuna baba vake,
Eksodo 18:3 Navanakomana vake vaviri zita romumwe rainzi Geshomi, nokuti akati, "Ndakanga ndiri mweni panyika yavamwe";
Eksodo 18:4 Nezita romumwe rainzi Ereazari, nokuti akati, "Mwari wababa vangu akanga ari mubatsiri wangu, akandirwira pamunondo waFarao."
Eksodo 18:5 Jeturo mukarahwa waMosesi akauya navanakomana vaMosesi nomukadzi wake kuna Mosesi murenje, pagomo raMwari, paakanga avaka misasa;
Zipora haana kuzotaurwa nezvake zvakare mumashure meizvi.
Zita rekuti Zipora ndiro rechikadzi kubva pana Zipo. Baraki aiva mwanakomana waZipo akazoita kuti vaMediani vatumire vakadzi vavo kunoita hupombwe navaIsraeri.
Zipo rakabva paizwi rinoreva kuti shiri inotomuka kana kusvetuka, inotendeuka nekukasika. Shiri dzedenga dzinotaurwa kuna Mateo dzichimiririra simba remadhimoni raSatani rinoparidza dzidziso dzenhema.
Mateo 13:4 Zvino pakukusha kwake, dzimwe mbeu dzakawira panzira. Shiri dzikasvika dzikadzidya.
Mateo 13:19 Kana munhu akanzwa shoko rovushe, asingarinzwisisi, wakaipa unosvika ndokubvuta chakakushwa mumoyo make. Ndiye wakakushwa panzira.
Pamberi, Mwari akatsiva vaMediani pamusoro pezvakaitika paBaari Peori akapotsa aparadza vese. Akangosiya Vakadzi Vana (Mhandara).
Numeri 31:16 Tarirai, ndivo vakatadzisa vana vaIsiraeri pamberi paJEHOVA pazvakaitwa paPeori, vapiwa mano naBaramu, denda rikavapo pakati peungano yaJEHOVA.
Numeri 31:17 Naizvozvo zvino urayai vakomana vose vari pakati pavana, muurayewo mukadzi mumwe nomumwe akavata nomurume;
Numeri 31:18 Asi muzvichengetere vanasikana vose, vasina kumbovata nomurume.
Mosesi serudzi rwaKristu haagoni kuva nemukadzi wemuMediani anomiririra Kereke akapinda muhupombwe. Anotora mhandara.
2 Petro 3:14 Saka vadikanwa, zvamunotarira zvinhu izvi, shingairai kuti muwanikwe naye munorugare, musinoruvara, musinemhosva;
Chimwe chinhu chinoisa musiyano pakati pavo ndechekuti Mukadzi mukushi haana zita rake rakataurwa. Akatora Zita raMosesi sezvinoita kereke inotora Zita raJesu Kristu.
VAEFESO 3:15 Avo, rudzi rwose kudenga napanyika runotumidzwa nezita ravo,
Zipora aive nezita rake mucherechedzo wemazita mazhinji emasangano emakereke avakazvisarudzira. Kune masangano anodarika 40000 nhasi emakereke ane mazita.
ZVAKAZARURWA 3:1 Nyorera mutumwa wekereke iri paSardisi, uti: Zvanzi naiye unemweya minomwe yaMwari, nenyeredzi nomwe: Ndinoziva mabasa ako, kuti unonzi uri mupenyu, asi wakafa.
Zvino ngatitarisei wanano yaMosesi yechipiri.
Numeri 12:1 Zvino Miriamu naAroni vakapopotera Mosesi nokuda kwomukadzi aiva muKushi, waakanga awana; nokuti akanga awana mukadzi aiva muKushi.
Dai Mosesi akanga aroora mukadzi mukushi kare, Aaroni naMiriamu vangadai vakawana nguva refu yekunyunyuta. Asi vakazongonyunyuta nguva iyi. Chikamu chekupedzisira chevhesi chinoti “nokuti aive awana mukadzi aiva muKushi.” chinoratidza kuti zvaive zvisina nguva refu zvaitika.
Numeri 12:2 Vakati, "Ko JEHOVA akataura naMosesi iye oga here? Ko haana kutaura nesuo here?" JEHOVA akazvinzwa.
Meriamu mucherechedzo wekereke yemaJuda naAaroni vatungamiri vezvitendero vechiJuda. Jesu paakauya kereke yemaJuda yakamuramba ikamurovera pamuchinjikwa. Akabva atora mukadzi mutsva, Kereke yemaHedeni, inomiririrwa nemukadzi muKushi. Zvino nguva nomwe dzemakereke dzakabva dzatanga umo Jesu Kristu ari kudaidza Mwenga wake. Mukati menguva iyi kereke yechiJuda “yakapofomadzwa”
Numeri 12:14 JEHOVA akati kuna Mosesi, "Dai baba vake vakanga vamupfira mate kuchiso chake, haazaifanira kunyara mazuva manomwe here? Ngaabudiswe kunze kwemisasa mazuva manomwe, agopinzwa pashure."
Numeri 12:15 Ipapo Miriamu akabudiswa kunze kwemisasa mazuva manomwe, vanhu vakasafamba, kusvikira Miriami adzoswazve.
Mumashure mekudarika kwenguva dzemakereke, Mwenga waKristu anotorwa kukwira kudenga Evangeri rodzokera kumaJuda.
VAROMA 11:25 Nokuti hama dzangu, handidi kuti musaziva chakavanzika ichi, kuti murege kuva namanyawi; kuti kuwomeswa kwomoyo kwakavuya pamusoro pavamwe vavaIsraeri kusvikira kuzara kwavahedheni kwapinda;
VAROMA 11:26 Naizvozvo rudzi rwose rwavaIsraeri ruchaponeswa; sezvazvakanyorwa zvichinzi: PaZiyoni pachabuda Musununguri; Uchabvisa kusada Mwari kunaJakobo;
VAROMA 11:27 Iyi ndiyo sungano yangu navo, Musi wandichabvisa zvivi zvavo.